Psoroptosis (scabs nke ntị, ntị scabies) nke rabbits: ihe ị ga-eme, ihe ị ga-emeso - Anumanu - 2020
Rabbit Psoroptosis: Mgbaàmà na Ọgwụgwọ Ụlọ
Rabbits bụ ndị dị nro dị nro na usoro nchịkwa dị njọ, nke mere ha na-enwekarị ọrịa dị iche iche.
Na ọgwụgwọ otu n'ime ha - psoroptosis, a ga-atụle n'isiokwu anyị.
Otu esi emeso scab na nti nke oke bekee
Nkwadebe maka ogbo
Video: ọgwụgwọ nke psoroptes na rabbits
Kedu ihe bụ psoroptosis na rabbits
Psoroptosis, ma ọ bụ scabies ntị, bụ ọrịa na-emerụ ahụ nke sitere na anụmanụ na anụmanụ. Nke a bụ ajọ ọrịa - ọ nwere ike ịzụlite n'agbanyeghị oge ahụ ma debe ya n'oge ọbụla n'afọ. A na-ahụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ikpe n'ọnwa ikpeazụ nke oyi na n'afọ iri mbụ nke oge opupu ihe ubi - ọ bụ n'oge a ka ụmụ anụmanụ na-enwe mmeri na njigide.
Anyị na-atụ aro ka anyị mụta otú e si emeso stomatitis, poddermatitis, flatulence, ọrịa ịrịa ọrịa, conjunctivitis, pasteurellosis na scabies na rabbits.
Ụdị ezé nile nke rabbits na ndị ọ bụla nọ n'afọ ọ bụla nwere ike ibute ọrịa a. Ọtụtụ mgbe, ọ na-emetụta ndị okenye. Ihe kachasị emetụta na psoroptosis bụ ụmụ anụmanụ na-anọgide na-adịghị mma, n'ime ụlọ nwere oke iru mmiri, ọ bụghị inweta nri kwesịrị ekwesị, na-ebelata ma ọ bụ na-ebute ọrịa. Ọrịa ahụ dị nnọọ ize ndụ ma bụrụ onye a na-agbanye ọgwụgwọ. Nlekọta nlekọta ahụike oge na nchọpụta nke a chọpụtara nke ọma na-enyere aka zere ọtụtụ ọnụọgụ anụ ụlọ na anụmanụ.
Ị ma? Ogologo oge nke nti ntị nke anụ ọhịa rabbit bụ 10-18 cm. Anụ ntị ndị dị otú a dị mkpa maka oke bekee ka ọ bụghị naanị ịnụ ihe ize ndụ na-eru nso: ha na-egbusi ụda ọzọ nke na-eme ka o sie ike ịghọta ozi dị mkpa, ọ na-enyere aka iji aka ya chọpụta ntụziaka nke ihe ize ndụ na-abịa. , nye elu uzo elu nke oma n'oge ikuku, chekwaa anu ahu site na ikpo oke oke site na ikpo oku na-enweghi mmiri.
Psoroptosis sitere na ọnya nke ntị Punroptos cuniculi. Parasaiti a nwere ntakịrị ozu - ruo 0.9 mm. Ahụ ya acha odo odo.
Mbemiso Psoroptos cuniculi
Ọdịdị mmepe nke ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ nwere oke ise: akwa - a nwa - a protonimph - telefon - ihe imago. Oge mmepe nke nwoke bụ 2-2.5 izu, ụmụ nwanyị - 2.5-3 izu. Nwa nwanyi na-etinye ya n'akpụkpọ anụ, na-ejide ha na masterbatch.
Ya onwe ya na-anọgide n'anụ anụmanụ ruo ọnwa 3, ma na-enweghị oke akọrọ rabbit nwere ike ịdị ndụ ruo ụbọchị 24. The causative gị n'ụlọnga na-ala n'iyi na mwepu okpomọkụ ma na + 80-100 ° Cel.
O nwere ike ịbụ na ọ bara uru maka ị mụta ụzọ ị ga-esi họrọ oke bekee mgbe ị na-azụta ịzụlite, chọpụtakwa ụdị ụdị nke rabbits ịhọrọ maka ịgafe.
Ọrịa na-apụta site na anụmanụ na-arịa ọrịa. Mgbe ọ na-apịa ntutu ya na akọrọ, nje ndị ahụ na-apụta na akpịrịkpa, akpụkpọ ahụ, na dandruff. Mgbe e mesịrị, ha na-agagharị n'ahụ anụ ọhịa rabbit.
Ọrịa nwere ike ime site na ngwongwo, ụlọ onu, uwe onye na-azụ anụ, na ihe nlekọta. Ụmụaka na-enweta nrịanrịa sitere na nne ha.
Oge nkwụsị ahụ na-adị site na ụbọchị 1 ruo 5.
Ihe mgbaàmà kachasị nke nsụgharị ntị:
mbupu na nti;
na-acha uhie uhie site na mbufụt nke ọwa mpempe akwụkwọ a;
ịkụ aka mgbe niile n'isi;
ihe ojoo na ihe ndi ozo mere ka umu anumanu jiri aka ya na-eme ka o buru ihe ozo;
enweghị nkuzi nke uzo n'ihi usoro mkpesa na etiti na n'ime.
Ọcha nke ntị bụ otu n'ime ihe mgbaàmà nke psoroptes na rabbits. Ọrịa ahụ na - abịa na 3 nkebi:
Dabere na oke, psoroptosis nwere ike ịbụ:
ụdị dị mfe;
Ọ dị mkpa! A ghaghị itinye ihe ọ bụla akwa ma ọ bụ ihe ndị e ji eme ihe na nhazi nke ụmụ anụmanụ. Ma ọ bụghị ya, ha nwere ike ịghọ isi iyi nke ọrịa.
Igwe onye na-agwọ ọrịa na-achọpụta ụdị asymptomatic mgbe ọ na-enyocha anụmanụ. Ọ na-eme nke a na-adabere na arịa ọbara nke ntị na-ejupụta na ọbara na e nwere eriri na canals ntị. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ụdị ọgwụ asymptomatic na oke rabbits, bụ ndị nne ha na-ebute. A na-egosipụta ụdị ìhè ahụ n'eziokwu bụ na n'ọnọdụ nkịtị, oke bekee na-amalitekarị ịkụda isi ya ma jiri aka ya kpuchie ntị ya. E nwere ike ịchọta ihe ndị dị na mkpụrụ ndụ. Mgbe ị na-enyocha nleba anya nke ọma, ị nwere ike ịhụ ntụpọ ọbara ọbara nke na-agbanwe. Mgbe ụbọchị 1-2 gasịrị, mmiri na-acha odo odo na-esi na ha apụta.
N'ọdịnihu, ọ na-agbapụta, ma n'ọnọdụ nke ihe ndị ahụ anọgide na-anọgide na-emepụta. Nyocha nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na-ekpughe nsị nke sọlfọ.
Ndị Rabbitheads kwesịrị ịgụ banyere otu esi eji Gamavit, Baytril, Dithrim na Amprolium maka rabbits.
Ụdị ahụ siri ike na-ekpuchi mkpụrụ osisi ndị nwere nnukwu eriri nke nwere ike igbochi ikiri ntị. N'oge nnyocha ahụ, a na-ahụ ọnyá ọbara na ọbara na ya, ísì ọjọọ na-esite na ntị.
Site na mmeri siri ike, oke bekee ahụ na-arịa ọrịa: ọ na-adịghị arụ ọrụ, na-ajụ iri nri, na okpomọkụ ahụ nwere ike ibili. Na steeti a, anwụrụ anụmanụ ngwa ngwa wee nwụọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ịmalite ọgwụgwọ na oge, mmịnye ahụ na-agafe na ụbụrụ nke ụbụrụ, nke ga-esi na ya nweta anụ ahụ ma jide ya. Mgbe ọrịa nke saịtị ndị a wara nsị na staphylococci na streptococci ga-ekwe omume. Site na nkwekọrịta siri ike, purulent meningitis yiri.
Ọzọkwa, ịghara inye nlekọta ahụike oge kwesịrị ekwesị na-atụ egwu ịnwechi olu, nkwụsị nke nkwụsi ike, nkwonkwo mmegharị nke mmegharị, na nsogbu nhụjuanya.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ịchọta otu n'ime mgbaàmà ndị dị n'elu na oke bekee gị, kpọtụrụ onye na-agwọ ọrịa gị ozugbo maka nyocha na ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị. Echela onwe gị, n'ihi na ọ nwere ike ime ka ọnọdụ anụmanụ dịkwuo njọ ma ọ bụ mee ka ọ nwụọ.
Iji chọpụta psoroptosis, onye na-agwọ ọrịa na-enyocha anụmanụ maka ọnụnọ nke akara ngosi, ma na-enyocha nyochacha akpụkpọ anụ si n'ime ime ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume igosi anụmanụ na onye na-agwọ anụ, ị nwere ike ime nyocha n'onwe gị, ma ọ bụrụ na ị na-ekpochapụ anụ ma gbanye ya mmanụ mmanụ. Mgbe ị na-ele ihe ndị dị na ya n'okpuru iko nke na-eto eto, a ga-ahụ ihe na-eme ka nje.
Usoro ọgwụgwọ gụnyere ọgwụgwọ zuru ezu na mpaghara. Ngụkọta bụ injections, mpaghara - na nhazi nke ntị.
Tupu ị na-emeso ọgwụ ọgbụgba ọgwụ, ị ga-ehicha ha. Iji mee nke a, a na-emeso ala ahụ emetụtara na ndị dị otú a:
kerosene + turpentine + ihe oriri (ịnweta) mmanụ dị ka hà;
tincture nke iodine + glycerin (1/4).
N'ihu nke pus, a na-ehichapụ ndị auricles na hydrogen peroxide (3%). Na mmalite nke ọrịa, ọ ga-ekwe omume na ụdị ọgwụgwọ a ga-ezu. Site n'inwe ike, a ga-achọ ọgwụ.
Ị ma? Na mmiri nke Oké Osimiri Japan, e nwere ala a na-akpọ Rabbit Island, nke a na-ewu ewu na ndị njem. Taa, ọ bụ ihe dị ka narị mmadụ asaa na-enwu ọkụ, bụ ndị na-ebi n'enweghị egwu na-esote onye. Ma, a machibidoro nwamba na nkịta ịbanye n'ókèala. E nwere nsụgharị 2 nke otú eared si bịa n'àgwàetiti ahụ: a kpọbatara ha maka nyocha ma ọ bụ wetara ụmụ akwụkwọ gaa n'àgwàetiti ka na-anọghị ebe obibi n'oge njem ahụ.
Dị ka a na-achị, rabbits na-agbanye n'ime apata ụkwụ site na "Ivermek" ma ọ bụ "Ivomek" (0.2%) na usoro ọgwụgwọ nke onye na-agwọ anụ. Ọ na-abụkarị 200 μg nke ọgwụ kwa kilogram nke ibu ahụ.
anụmanụ ntị lubricated acaricidal mmadụ - dusts, ointments, aerosols ( "Akrodeksom" "Psoroptolom" "Tsiodrinom" "Dermatozolom"), liniments sịntetik pyrethroids (e.g., "cypermethrin," "butoxy" "Stomazanom" "Neostomazanom" , "Mustang"), phosphorus-organic acaricides ("Neocidol", "Tsiodrinom", "Chlorophos"). Mgbe a gwakasịrị ya, a na-ekpuchi ntị ya nke ọma ka ngwaahịa ahụ wee dịkwuo mma ma mee ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị na mbụ, mgbe ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa iji ọgwụ ike na-agwọ ọrịa naanị otu ugboro. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a na-eme ọgwụgwọ okpukpu abụọ, ugboro atọ n'otu oge n'izu.
A ghaghị ịdọrọ ọrịa rabbit ka ọ dị na klas. Ọ dị mkpa ka onye ọ bụla nwere ahụ ike na-emeso onye na-ahụ maka ọgwụ acaricidal. A ga-ehichapụ oghere ahụ ma dozie ya. Maka disinfection adaba emulsions mmiri nke cyodrin (0.25%) ma ọ bụ creolin. Ọ bụrụ na e nwere ígwè ma ọ bụ nkedo nhicha, ọ ga-etinye ya na blowtorch.
Kwekọrịta, mgbochi kachasị mma nke ọrịa oke bekee bụ disinfection n'oge.
Uwe na akpụkpọ ụkwụ, nke na-arụ ọrụ na rabbits na-ewere ọnọdụ, kwesịrị ọkụ ma ọ bụ tinye ya maka ịdọrọ ọrịa n'ime ụlọ na-esi na steam.
Iji zere mmepe nke ọrịa ahụ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na a na-egbochi mgbochi:
edebe iwu ọcha na zoohygienic maka idebe rabbits;
na-ebubata ụmụ anụmanụ naanị site na ugbo ọgaranya;
tupu ha amalite ịchọta ìgwè anụ ahụ, ha ga-edebe ya na nkeji kwa ọnwa;
nyochaa enwetara anụmanụ maka ọrịa psoroptosis;
na-enyocha anụ ụlọ anụ ụlọ (1 oge n'ime ọnwa 2) na onye na-agwọ ọrịa anụmanụ;
mkpụrụ ndụ disinfect abụọ ugboro abụọ n'afọ;
iji zere ịmịnye ụmụ ọhụrụ site na nne na nna ha, tupu ha na-enye ndị ntị na ntị na nti nke nwoke na nwanyị, mating;
nyochaa ọnụọgụ abụọ nke nwanyị 2 izu tupu ọkpụkpụ ahụ;
hazie ezigbo ihe oriri.
Nri zuru ezu nke oke bekee bu ihe ngbochi nke psoroptosis. Ya mere, psoroptosis bu oria ojoo ojoo nke umu nti na-eme ya ma jiri ogba ozo na akwukwo odiri. Ọrịa ahụ chọrọ ọgwụgwọ mmanye, ebe o nwere ike imeri mmadụ niile n'oge na-adịghị anya. A na-ebute nri ndị sitere na anụmanụ na anụmanụ.
Otu n'ime mkpa kachasị mkpa nke oke bekee bụ mkpa ọ dị iri nri. Na-aguta banyere oge na otu esi azụ ụmụ anụmanụ na anụ ụlọ, nakwa tụlee àgwà nri nke rabbits na oyi.
Ka ọgwụgwọ wee dị irè, ọ dị mkpa na onye na-agwọ ọrịa na-eme atụmatụ ya. A na-agwọ ọgwụgwọ site na ogwu na iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Otu ọrụ dị mkpa n'ịzere mmerụ nke ndị bi na psoriopiasis bụ ihe mgbọrọgwụ.